Namoaka fanambarana manoloana ny raharaham-pirenena - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manoloana ny zava-misy sy fahasahiranana iainan’ny firenena sy ny vahoaka:
- Ny fikorosin’ny fainam-pirenena sy ny fahantrana lalina iainan’ny vahoaka Malagasy efa nijoroan’ny K3F sy nanomezany sosokevitra mazava mba hisian’ny Fanarenam-pirenena tena izy tamin’ny fivoriana natao tany Fianarantsoa ny 17 sy 18 aprily 2018.
- Ny tsy fandriampahalemana mihamahazo vahana ka manabotry ny fainam-bahoaka noho ireo herisetra mahazo laka.
- Ny tsy fahamarinana sy ny kolikoly manosihosy ny lalàna, ny rariny sy hitsiny.
Navoitra tamin’izany fa ny fifampidinihan’ny samy Malagasy miainga avy any ifotony no lalana hahafahana manavotra ny frenena (dialogue natonal).
Tsy izany anefa no zava-nisy fa hazakazaka nankamin’ny fifidianana no noheverintsika ho vahaolana araka ny didy navoakan’ny HCC. Najoro ny Governemantan’ny marimaritra iraisana mba hikarakara io fifdianana io, miaraka amin’ny CENI. Nampanantenaina ny Vahoaka fa io fifdianana io no ho vahaolana ho an’izao fahasahiranan’ny frenena izao ary ho marina sy mangarahara ary eken’ny rehetra izany fifidianana izany.
Milaza miara-mahita anefa isika ankehitriny fa misy ampahan’olona mandà ny voka-pifidianana vonjimaika, sy manohitra ny fomba nikirakirana sy nitantanana ny fifidianana. Toy izany koa, ny mbola firongatry ny tsy fandriampahalemana saiky manerana ny Nosy; ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fitombon’ny fahantrana lalina iainan’ny Malagasy maro an’isa, ary ny fahapotehan’ny soatoavina Malagasy, toy ny fhavanana sy ny fifanajana ary ny firaisan-kina.
Azo ambara tsy am-pihambahambàna fa tsy nahavita ny andraikiny ny govrrnamanta, na teo amin’ny fikarakarana ny fifidianana izany, na teo amin’ny fiarovana ny ain’ny vahoaka sy ny fananany izany, ary na teo amin’ny fahiana ny sosialim-bahoaka koa aza. Arak’izany dia tsy mbola lany andro mihitsy ny fehin-kevitra tany Fianarantsoa manao hoe : tsy vitan’ny tompon’andraikitra ara-panjakàna ny mametraka ny FAHAMARINANA sy ny FANDRIAMPAHALEMANA mba hisian’ny FIADANANA eto amin’ny Firenena koa raha mbola heverin’ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa voafehiny ny fitantanana ny frenena, dia aoka izy haneho fa vitany ao anatin’ny fotoana fohy ny mampitsahatra izao fahoriam-bahoaka izao.
Koa averina etoana ny antso nataonay K3F ho an’ny tompon’andraikitra samihafa tamin’izany fhaonam-be tany Fianarantsoa izany mba samy hanao izay manandrify azy maika, satria hetaheta sy fanirian’ny olompirenena rehetra ny hiadana sy ho finaritra eto anivon’ny Nosindrazantsika. Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy zary fototra iorenan’ny tranobe iombonana ny FAHAMARINANA, hampanjaka ny FANDRIAMPAHALEMANA, hiainan’ny isambatan’olona ny FIADANANA.
Mitodika manokana amin’ny HCC amin’izao fiandrasana ny famoahana ny voka-pifdianana ofisialy izao, aoka ny marina sy ny ara-dalàna irery ihany no hibaiko anareo.
Tonga izao ny fotoana hanandratana avo ny fandrianam-pirenena, tsy ho baikon’ny Communauté Internationale lava amin’ny fitantanana ny firenena, ka mahatonga antsika angady tsy mahatapaka ahitra sy lasa kofehy manara-panjaitra fotsiny na ny governemanta na ny CENI.
Koa mba hiarovana ny firenena tsy ho latsaka indray ao anaty lavaka mangitsoky ny kirizy politika lavareny, namotika ny firenena sy nampahory ny vahoaka : ny HCC no hany andrim-panjakana ho tandroka aron’ny vozona antrnaina hampanjaka ny marina araka ny lalàna eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
Koa antso no atao ho an’ny rehetra mba hijoro amin’ny hambom-pom-pirenena hahay hifampidinika sy hifandamina ny samy Malagasy fa tsy hiandry baiko na hiankin-doha mandrakariva amin’ny vahiny izay fantatra fa tsy mijery afa-tsy izay tombotsoany.
Koa antitranterinay etoana fa tsy misy fanarenam-pirenena tena izy azo antenaina raha tsy mijoro eto amin’ny tanintsika ny Fahamarinana mampanjary Fandriampahalemana, mitondra Fiadanana. Atomboka eny ifotony ny fifampidinihana handaminana sy hanarenana izao fahavoazana lalina izao. Koa manaitra ny Ray aman-dreny na ara-pinoana na ara-drazana na ara-piaraha-monina handray andraikitra ny amin’izany, fa « ny tany misy olobe tsy miady zaza ». Antsoina toy izany koa isika vato nasondrotry ny tany isan-tsokajiny, indrindra ny tafika sy ny mpitandro filaminana.
Farany, mitodika amintsika valala tsy mandady harona : velomy ao ampontsika ny fanahy mahamalagasy antsika, fa « ny hery tsy mahaleo ny fanahy ». hamafiso hatrany ny fraisan-kina ary ilaozy ireo hevitra mampizarazara sy mampiady ka manimba ny fihavanana. “Aza manaiky ho resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy” Rom. 12/21
Antananarivo faha, 3 janoary 2019